Ireo zavatra tokony eritreretina momba ny SEO - Semalt Expert
Raha mbola mitohy mivoatra ny SEO, dia mila manova ny tetika koa ny mpividy. Oliver King, manam-pahaizana Semalt , dia milaza fa misy modely mivoatra sy mahomby kokoa amin'ny môtô karazana fikarohana mivoatra isan'andro. Izany dia valin'ny fiovàna toy ny an'i Google izay nanova ny algorithma mba hahazoana antoka fa tsy mamitaka na manararaotra azy ireo ny olona - cost of long term care in florida. Na dia tetik'ady tsara indrindra hisorohana ny tsy fahamarinan-toetra aza dia midika koa izany fa tsy maintsy hiantso ny SEO
Ny fampindramam-bola dia mampiakatra ny maha-zava-dehibe
Ny fahazoana antoka fa ny iray mikendry ny teny fanalahidy hanentanana ny fialan-tsasatra dia zavatra tsara ho an'ny fandraharahana. Na izany aza, ny filamatra avo lenta ao amin'ny fikarohana dia tsy midika fa ny iray dia afaka mitombo amin'ny fidiram-bola. Mahomby ny fampiasana fitaovana toy ny KISSmetrics, na RJMetrics hanarahana ny mpanjifa sy ny fangatahana fampiasa matetika. Amin'ny farany izy ireo dia mitarika ny fahombiazan'ny marika. Ny olona dia tokony hitsahatra fa ny lazan'ny lazam-pandrenesana dia tena ROI.
Ny fifandraisana maivana
Niova ny fotoana raha afaka miditra amin'ny Internet amin'ny alalan'ny ordinatera ihany ny olona. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fananana smartphones, mbola manohy manamboatra fitaovana finday ny taranja gadget izay nampiasaina mba hitadiavana fikarohana. Google dia manandrana hampiroborobo io fampiasana io amin'ny fiantohana fa ireo tranonkala izay ambony noho ny SERP dia manana tranokala maimaim-poana ho an'ny marika. Ireo tranonkala izay tsy maimaim-poana amin'ny finday dia matetika miteraka enta-mavesatra izay misy fiantraikany amin'ny SEO. Ataovy izay hahazoana antoka fa tsy misy na inona na inona izay mampihena ny haavon'ny pejy entina ao amin'ny fitaovana finday raha toa ka alefan'ny finday ny tranokala.
Nolazain'i Vs. Nampidirin'i dadarabe |
Ny rohy voatondro dia ireo izay mifandray mivantana avy hatrany amin'ilay tranokala. Misy rohy voafaritra izay mitranga any amin'ny tranonkala iray hafa miresaka ny votoaty ao amin'ny tranonkalan'ny tompony. Ny fanamarihana avy amin'ny tranonkala iray dia maneho ny safidim-pahatokisana ary Google dia manasokajy izany ho fanehoana ny laza. Izy io dia voalohany mandanja ny lanjan'ny tranonkala sy ny habetsahan'ny olona miresaka izany.
Tsy misy tanjona amin'ny fanentanana SEO marketing raha tsy misy ny votoaty sarobidy hanohanana azy. Raha toa ka tsy afaka mividy ny votoatiny ny olona iray, dia lasa tsy ilaina ny SEO. Ny kalitaon'ity votoaty ity dia ho loha laharana ny habetsahana. Misy fomba roa ahafahana manana votoatim-pahalalana: hampiasa ireo antontan'antoka amin'ny teny fototra mba hanamafisana ny fahitana, ny fifanakalozan-kevitry ny blaogy vahiny, fanolorana fampisehoana ny FAQs, ary ny famoahana votoatin-javatra izay ampiasain'ny loharanom-pahefana manan-danja sy mahazatra.
Miaraka amin'ny SEO ratsy
Sarotra ny manakana ny fampielezan-kevitra SEO SEO manohitra ny tranonkala. Na izany aza, miaraka amin'ny fanampian'ny Google Webmaster Tools, azo atao ny mametraka ny fahavoazana. Amin'ny alalan'izany dia afaka manara-maso sy manara-maso ny antontan'isa rehetra ny olona iray mba hamantarana ny fihetsika mampiahiahy. Ny kely indrindra dia manondro ireo fandrahonana ireo, ny ela dia afaka miady. Ny SEO ratsy tsy voamarina dia mety hiteraka sazy amin'ny Google.
Fifandraisana amin'ny fanorenana
Ataovy azo antoka ny fifandraisana amin'ny mpivarotra hafa niorina amin'ny zavamaniry misy ny zavamaniry misy ny laingany. Ny fifandraisana amin'ny toerana sasany dia mety hahasoa raha toa ka maniry ny hiara-miasa ny olona mitovy hevitra amin'izany.